''Xilligii doorashada lama gaarin''
6 Mar 6, 2012 - 4:52:52 AM
Maamulka gobolka Bari ayaa maanta 6 March, 2012 soo saaray wareegto digniin loogu dirayo Cabdulahi Siciid Samatar kaasoo sheegtey inuu yahay musharax.
Cabdi.Samad Maxmed Galan gudoomiyaha gobolka Bari oo saxaafadda la hadlay ayaa xusay inay jiraan guddi doorasho oo jaangoynaya xilliga doorashada iyagana laga dhursagayo,balse waxa uu sheegay inaan loo baahanayn in iyadoo aan la gaarin la bilaabo olole kaasoo keeni karo amni xumo.
Hadalkan ayaa waxa uu ka danbeeyey xili maalintii shalay 5 March,2012 garoonka diyaaradaha Bossaso uu ka soo dagay Cabdulahi Siciid Samatar oo sheegay in uu yahay musharax u loolami doona madaxtinimada Puntland.
Cabdulahi Siciid Samatar oo maamulkii Madaxweynihii hore ee Puntland Cadde Muse iyo midka Madaxweynaha iminka Mud. Cabadiraxman Farole ka noqdey Wasiirka amniga ayaa xilkiisa ku waayey kadib markii afduubyo iyo dilal qorsheysan hareeyeen Puntland.
Halkan ka dhageyso warsaxfadeedka Cabdi Samad Maxamad Galan More Articles